Fanabeazana · Aogositra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fanabeazana · Aogositra, 2011
Tantara mikasika ny Fanabeazana tamin'ny Aogositra, 2011
Afghanistan: Feon'ny Tanora Afghan Ao Amin'ny Lanonamben'ny Fampitam-baovao Marolafy
Azia Afovoany sy Kaokazy 29 Aogositra 2011
Ao Afganistana, nikofokofoka tokoa ny tambazotra Internews mba hanazatra sy hanetsiketsika ireo tanora Afghan hizara ny fomba fijeriny amin'izay lohahevitra mahaliana azy ireo ao amin'ny Afghan Youth Voices Festival na Lanonamben'ny Tanora Afghan manandram-peo sy ny lasim-pampitam-baovao. Ny Afghan Youth Voices Festival dia sehatra iray ahafahan'ny tanora Afghan maneho ny heviny, na...
Nihetsika mangataka fanavaozana ny rafi-pampianarana ireo Shiliana mpianatra nanomboka tamin'ny Aprily. Anaty lahatsary tsy ela akory izay, azo atao ny mahita tranga tanaty fihetsiketsehana iray, ka nandritra izany dia nifampiraharaha ry zareo ka nahavita nandresy lahatra andian-jiolahim-boto nisaron-tava handao ny toerana. Maneho ny fanohanan-dry zareo ny mpianatra ireo Shiliana any anaty tambajotra sosialy any, amin'ny alalan'ny fivelesana vilany rehefa amin'ny 9 ora alina.
Azia Atsinanana 11 Aogositra 2011
Amerika Latina 09 Aogositra 2011
An-jatony ireo Shiliana mpianatra, nitaky ny fanavaozana ny rafi-panabeazana azy ireo, no nifampitàna tamin'ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy satria nanao hetsika tsy nahazoana alàlana izy ireo tamin'ny Alakamisy 4 Aogositra 2011, nanerana ny afovoan-tanànan'i Santiago renivohitra. Ao amin'ny Twitter, ilay hetsika dia tafakatra ho amin'ny toeran'ny lohahevitra tena resahana be ao an-tanàna noho ireo mpianatra mbola maneho ny hatezerany tsy mitsaha-mitombo.